Abalimi baxwayisa ngengozi uma ingasheshi ukulunga ingqalasizinda elinyazwe yizikhukhula. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Usho kanje uNksz u-Andrea Campher, imenenja yophiko lwe-risk and disaster e-Agri SA. Nokho ugcizelele ukuthi ukudla akushodi. “Sizikhiqizela ukudla okwanele eNingizimu Afrika futhi size sidayisele namanye amazwe. Kungekudala abalimi bemikhiqizo yombila bazobe bevuna ngoJuni nangoJulayi.
“Kodwa-ke uma ingqalasizinda ingalungiswa masinyane singagcina sesinenkinga futhi kuzothinteka bonke abalimi futhi kubeke nemisebenzi engcupheni,” kusho uNksz uCampher.
I-Agri SA ithi akusukunyelwe ukulungisa umonakalo
Lezi zikhukhula ezidlule nemiphefumulo yabantu abawu-449 zicekele phansi ingqalasizinda njengoba kubhidlike imigwaqo, amabhuloho, amapayipi nasechwebeni laseThekwini, nokuphazamise ukuthutha izimpahla; ngisho naleyo edayiselwa amanye amazwe. Kunezinkulungwane zabantu ezisale dengwane ngenkathi kumuka amakhaya azo futhi kukhona abantu abasabhekwa, abangakatholakali.
I-Durban Chamber of Commerce and Industry ithe izibalo ziveza ukuthi umnotho waseThekwini ulahlekelwe wuR737 million kusukela mhla ka-14 Ephreli.
UNksz uCampher uthe okwamanje bagxile ekulekeleleni abantu abadinga usizo kanti isibalo esiphelele somonakalo abakasazi. “Esikwaziyo nje esikuthole kwiCanegrowers Association wukuthi umonakalo othinta abalimi bayo ubumi kuR222m mhla ka-19 Ephreli… yilezo kuphela izibalo esisenazo.
“Siyazi ukuthi umonakalo uzoba mkhulu kakhulu futhi uzonabela nakwezinye izimboni. Nokushoda kwamanzi kuzogcina sekuyinkinga. Nakhu nangesonto elizayo kuthiwa kulindeleke enye imvula,” kusho uNksz uCampher.
Umbiko omusha waseTrasnet, elawula ukuthutha izimpahla ngemikhumbi nangezitimela, uthi ukubuyela kwesimo kwesejwayelekile echwebeni laseThekwini kuhamba kahle njengoba ngoLwesibili kusebenze imikhumbi ewu-82. Nomgwaqo omkhulu ongenela echwebeni uBayhead usuqalile ukusebenza kancane kanti emasontweni amabili ezayo kulindekele ukuthi kuvulwe eminye imizila engenela khona.
Ukusebenza kwezitimela eCato Ridge naseNingizimu yesifundazwe kusamisiwe ngenxa yomonakalo owenzeke kujantshi. Le nkampani ithe amapayipi ayo awathintekanga.
UMnu uZamokuhle Thwala, isikhulu esiphezulu se-Agrikool, inkampani exhumanisa abalimi nabadayisi basemgwaqweni eMgungundlovu, uthe sekuphele amasonto amabili umkhiqizo ungadayiseki kahle.
“Ngesonto eldlule nje bekungadayiseki kahle ngoba abantu bebengekho edolobheni ngoba abadayisi bethu basedolobheni. La masonto amabili abenzima. Ngenyanga siyaye singenise mhlawumbe uR1.2m kodwa kule nyanga ngisho ukufinyelela kuR600 000 kuzoba nzima,” kusho yena.
UMnu uThwala, isikhulu esiphezulu se-Agrikool
NgoMsombuluko uMengameli uCyril Ramaphosa uthe umonakalo odalwe yilezi zikhukhula ezihlasele naseMpumalanga Kapa nomlilo ocekele phansi imizi eLanga, eNtshonalanga Kapa, usho ukuthi izwe linenhlekelele kanti usizo luzohlinzekwa kusetshenziswa umthetho wezinhlekelele.
URamaphosa uthe kukhona uR1 billion osuhlinzekwe wumNyango wezeziMali ukulekelela iKZN. Uthe kuzoba khona nolunye usizo oluzoqhamuka ngesikhwama esasungulwa ngenkathi kubheduka iCOVID-19, iSolidarity Fund.